जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेपाल मोह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जापानका पूर्वप्रधानमन्त्रीको नेपाल मोह
राजनीतिक स्थायित्व भए लगानी आउँछ : जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री
चैत्र ७, २०७३ चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौं — जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. युकिओ हातोयामा नेपालको चारदिने निजी भ्रमणमा छन् । शनिबार काठमाडौं उत्रिएका उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । उनले नेपाल आउन पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनले नेपालमा संविधान जारी भइसकेको र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेकामा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उनले राजनीतिक स्थायित्वले विकासको ढोका खोल्ने हुनाले त्यसतर्फ नेपाल उन्मुख हुुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
‘निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको कामना गर्छु । जसले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ । सुन्दर मुलुकमा लगानी बढाउन सबै चाहन्छन्,’ उनले भने । २००९ सेप्टेम्बरदेखि २०१० जुनसम्म जापानको प्रधानमन्त्री रहेका हातोयामा पटक–पटक नेपाल आउने जापानी उच्च राजनीतिज्ञ हुन् । जापानमा केनेडी परिवारको छवि बनाएको हातोयामा परिवारको नेपाल मोह पुरानै हो ।
उनकै हजुरबुबा इचिरो हातोयामा जापानको प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९५६ को सेप्टेम्बरमा नेपाल–जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । उनको परिवारबाट नै चार पुस्तादेखि जापानमा सभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद रहँदै आएका छन् ।
हातोयामा परिवारका सदस्यहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिँदै गएको पुराना कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । हातोयामा चार वर्षअघि पनि निजी भ्रमणमा आएका थिए । यस पटकको भ्रमणका क्रममा उनले दुईपक्षीय व्यापार र नेपालमा लगानीका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
उनका पिता इइचिरोले पहिलोपटक सन् १९७७ मा जापानी विदेशमन्त्रीका रूपमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनका पिताको भ्रमणको ३५ वर्षपछि मात्र जापानका परराष्ट्रमन्त्री कोइचिरो ग्याम्बाले चार वर्ष अघिमात्र नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेको स्मरण जापानका लागि पूर्वराजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले गरे ।
उनको पितासँग सन् १९७७ मा राइजिङ नेपालका लागि अन्तर्वार्ता लिएको स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘जापानबाट पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा भ्रमण भएको थियो । कुराकानी गर्न पाएँ । पछि जापानमा राजदूत हुँदा उनको परिवारसँग भेटघाट गर्न पाएँ । उनको परिवारमा नेपालप्रति माया र सद्भाव निकै छ ।’
योस्तरको भ्रमणले पनि दुईपक्षीय लगानी र सद्भावलाई माथि उकास्ने पूर्वराजदूतहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ २०:२१
विश्वमा शान्ति स्थापनामा नेपाल लागिरहन्छ : प्रधानमन्त्री
२८ मुलुकको संयुक्त सैनिक अभ्यास
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वमा शान्ति स्थापनामा नेपाल लागिरहने बताएका छन् । काभ्रेको पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति प्रयास–३ प्रशिक्षण’को सोमबार उद्घाटन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेपाली भूमि इमान्दारी र शान्तिका लागि प्रख्यात छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएदेखि नै नेपालले विश्वमा शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अब पनि गरिरहने छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले नेपालले बृहत् शान्ति सम्झौताबाट शान्तिको बाटो अपनाएको उल्लेख गर्दै शान्तिसुरक्षामा लागिरहने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वमा शान्ति स्थापना गर्न नेपालीको ठूलो भूमिका भएको भन्दै शान्ति मिसनमा सहभागी हुने नेपाली सैनिकहरूको प्रशंसा गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा एकीकृत रूपमा काम गर्न सहजताका लागि नेपाली सेनाले यो प्रशिक्षण तेस्रो पटक आयोजना गरेको हो । चैत २१ सम्म हुने प्रशिक्षणमा २८ मुलुकका १ हजार २४ सैनिक प्रशिक्षार्थी र प्रशिक्षक सहभागी हुँदै छन् । जीपीओआई (अमेरिकी सरकारको राजनीतिक–सुरक्षा विभागले शान्ति स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा क्षमता र क्षेत्रीय सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न स्थापित कार्यक्रम) मा रहेका २१ र ७ अन्य मुलुक प्रशिक्षणमा सहभागी छन् ।
प्रशिक्षणमा सहभागी हुने जीपीओआई मुलुकहरूमा नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाम, बोस्निया हर्जगोभिना, घाना, रुवान्डा, जोर्डन, कजाकस्तान, पाकिस्तान, पाराग्वे, फिजी, मेक्सिको र उरुग्वे छन् । जीपीओआई बाहेकका मुुलुकमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अमेरिका छन् । नेपाली सेनाले व्यवस्थापनको व्यवस्था गरे पनि यसको प्रशासन र आर्थिक पक्षमा नेपाली सेना र अमेरिकी प्यासिफिक कमान्डले संयुक्त रूपमा बेहोर्ने छन् ।
प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले १७ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बहुराष्ट्रिय शान्ती प्रयास प्रशिक्षणले शान्ती स्थापनामा शान्ती स्थापनाकर्ता बीचमा मिलेर काम गर्न सहज हुने बताए । नेपालले यसअघि सन् २००० मा पहिलो र २०१३ मा दोस्रो बबहुराष्ट्रिय शान्ति प्रयास प्रशिक्षण गरेको थियो । बंगलादेश, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, श्रीलंकालगायत मुलुकहरूले हरेक वर्ष विभिन्न नाममा शान्ति मिसनमा मिलेर काम गर्न सहज होस् भनेर उक्त प्रशिक्षण गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत एलिना बी टेप्लिजले शान्ती स्थापनामा अमेरिकी सरकारले धेरै प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै नेपाली सैनिकहरूले विश्वमा शान्ती स्थापनामा खेलेको भूमिकाको प्रसंशा गरिन् । अमेरिकाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एडमिरल हेरी बी. हेरिस जेआरले अभ्यासले विभिन्न मुलुकहरूका सैनिक बीच शान्ती स्थापना गर्दा सहज रुपमा अगाडि बढ्न मद्दत मिल्ने बताए ।
नेपाली सेनाले हालसम्म ४१ फरक मिसनमा १ लाख ११ हजार ३८ सैनिक खटाइसकेको छ । मिसनमा बढी सेना खटाउने वरीयतामा छैटौं नम्बरमा रहेको नेपालको अहिले १५ मिसनमा ४ हजार ४ सय ६० सैनिक कार्यरत छन् । प्रशिक्षणसँगै चैत १७ देखि २० सम्म क्षेत्रीय अभ्यास सेमिनार पनि हुँदैछ । सेमिनारमा भाग लिन राष्ट्रसंघ महासचिवका शान्ति मिसन अपरेसनका सुरक्षा सल्लाहकार लेफटिनेन्ट जनरल कार्लोस हुम्बेर्टो आउँदै छन् ।